Mayelana Nathi - Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd.
I-Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd.,Ingumhlinzeki ohamba phambili wama-compressors wegesi, Le nkampani izinze eXuzhou City, eSifundazweni saseJiangsu, eChina.Ihlanganisa indawo engu-91,260㎡,Selokhu kwakhiqizwa ama-compressor egesi ngo-1965,
Inkampani yethu iqongelele isipiliyoni esicebile sokuklama kanye nekhono lokukhiqiza,Inomsebenzi wokubumba, uphonsa, wokwelapha ukushisa, ukushisela, ukukhanda imishini, ukuhlolwa komhlangano kanye namanye amakhono okukhiqiza nokucubungula,Futhi nemishini yokuhlola ezobuchwepheshe ephelele nezindlela,Singakwazi ukuklama, senze futhi sifake imikhiqizo ngokusho kwe amapharamitha amakhasimende.
Ukukhishwa kwaminyaka yonke kwamasethi angu-500 e-compressor yegesi ehlukahlukene kuye kwakhiwe.Okwamanje, ukucindezela kwe-compressor outlet okukhiqizwa yinkampani kungafinyelela ku-50MPa,Imikhiqizo yethu ihlanganisa imikhakha yezokuvikela kazwelonke, i-aerospace, amandla enuzi, i-petrochemical kanye neminye imikhakha.
Imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni amaningi emhlabeni jikelele, Ikakhulukazi: i-Indonesia, iGibhithe, iVietnam, iNingizimu Korea, iThailand, iFinland, i-Australia, i-Czech Republic, i-Ukraine, iRussia namanye amazwe, singanikeza izixazululo eziphelele zokumisa okukodwa kuwo wonke amazwe. ikhasimende emhlabeni wonke, Inkampani yethu iqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende aqinisekiswa ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nesimo esihle kakhulu senkonzo.
Imikhiqizo engaphezu kwe-10 ye-compressor yegesi esunguliwe kanye namalungelo obunikazi amasha asebenzayo.
Imikhiqizo ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-20, Made in China, International Demand
Inkampani yethu itholakala eXuzhou, eChina, Ihlanganisa indawo engu-91,260 ㎡ kanye nendawo yokwakha engu-55,497 ㎡.
Iminyaka engaphezu kwengama-50 yesipiliyoni sokukhiqiza igesi compressor
Ithimba lochwepheshe, qhubekani nithuthuka, lenza imikhiqizo namasevisi ekhwalithi ephezulu ye-compressor yegesi, futhi nilwele ukwaneliseka kwamakhasimende okungu-100%.